Guddoomiyeyaashii Olompikada iyo xiriirka cubadda cagta ee Somaliya oo ku dhintay qaraxii Muqdisho. – Radio Daljir
Guddoomiyeyaashii Olompikada iyo xiriirka cubadda cagta ee Somaliya oo ku dhintay qaraxii Muqdisho.
Muqdisho, Apr, 04 – Allaha u naxariistee waxaa qarixii muqdisho ee maanta ku dhintay Adan xaaji Yabaraw ‘Wiish’ oo ahaa guddoomiyaha Olompikada Soomaliyeed iyo Siciid Mugaanbe oo ahaa guddoomiyihii xiriirka kubadda cagta ee Soomaliya, kuwaas oo ka qaybgalayey xaflad ka dhacaysay xarunta tiyaatarka ee magaalada Muqdisho.
Sidoo kale waxaa qaraxaasi ku dhintay labo qof oo kale waxaana ku dhaawacmay dad badan oo ay ka mid yihiin wariyeyaal, mas’uuliyiin dawladeed iyo dad rayid ah.
Ururka Al-shabaab ayaa qaraxaasi sheegtay, waxayna beeniyeen in qaruxu ahaa ismiidaamin balse uu ahaa miino goobta lagu sii aasay, dawladda ayaa sheegtay in qaraxa ay fulisay gabar isku soo xirtay waxyaabaha qarxa. waxaa sidoo kale wararka madaxa banaani ay sheegayaan in qaraxa ay fulisay gabar isasoo miidaamisay.
Ciidanka dawladda ayaa wali goobta uu shilku ka dhacay ku hareeraysan, waxaana halkaasi ka socda baaritaan lagu ogaanayo sida wax u dheceen.